Hine (ugologo): Incazelo ye ukunambitheka, ukubuyekezwa
Phakathi kulawulwa nemithetho efanele iziphuzo eFrance, kokuba ilungelo ubizwe Cognac, ke kufanele kwenziwa udumo. Hine - nogologo isiFulentshi, kodwa izimpande ngesiNgisi. Mhlawumbe yingakho eponymous nogologo endlini kuphela esifundeni ukhishwa ngokusemthethweni kwamalungelo ukuphakela imikhiqizo yabo ukuze esigodlweni sayo. Futhi eFrance, ekhaya, lesi siphuzo ingenye elite naphakathi kwabakhileyo kuleli zwe.
nogologo endlini Hine wazalwa kudala, ngenkathi uVoltaire eFrance, ngo 1763. Kulowo nyaka, isihloko IsiZulu Tomas Hayn wathumela ezweni libalele elilandelayo - France. Ifika edolobheni Jarnac ukuyithuthukisa lolimi French. Kodwa lapha iqala impi phakathi emazweni aseduze, futhi kuye le nsizwa waboshwa. Coming ngemva (dlala) nenkathi yenkululeko, washada waseFrance Francoise Affairs, eyise wasebenza nogologo ibhizinisi. Ngokushesha nomalokazana kuba umlingani wawo, futhi ngo-1817 Thomas kakade iqala yayo lokuphatha ukukhiqiza futhi enikeza igama lenkampani, "Hain". Kusukela ngaleso sikhathi kuye kwaba cishe amabili eminyaka izinto zihamba ekukhuphukeni, futhi Hine - nogologo abathandwa Ongoti imimoya kweqiniso. Adume logo - inyamazane, okuyinto manje kuhlobisa amalebula iziqukathi - khona ngo-1866.
Hine Cognac endlini - ngomunye wabokuqala ukuthi izindondo ngamazwe. Ngokwesibonelo, e-United States ngo-mncintiswano e 1859. Futhi phakathi nekhulu leminyaka eledlule inkampani "Hain" uvumelekile ukwenza ukudiliva ku emagcekeni ezigodlo British (indlela esemthethweni). Ngenxa ukukubika ingxenye yebhizinisi amasheya idluliselwe inkampani ephethe Louis Vuitton, notorious "Hennessy". Kodwa kuze kube Ikhredithi "uHein" ekhaya, bakwazi ukugcina inhlangano yabo eyisisekelo ukukhiqizwa futhi izakhiwo. Namuhla inkampani ephethe Bernar Hayn, ozalweni Thomas, ekusungulweni uyise le nkampani, 6 isizukulwane.
By the way, umbusi wamanje - a fan of big isiko ugwayi. Hhayi lutho ezincomweni indlela yokusebenzisa Hine (nogologo), isikhala kakhulu unikezwa ukuphuza ukuhambisana izinhlobo ezinkulu nogwayi eliye laba litshwayo izimfanelo yenkampani ngeziphansi futhi ukunambitheka nogologo.
I "uHein" endlini nhlobo izivini siqu. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi leli qiniso kufanele izinkinga ukukhiqizwa eliphezulu isiphuzo. Nokho, isixazululo ilula: utshwala othengwe kusukela abakhiqizi kunombono Grand futhi Petit Champagne (ikakhulukazi distillates abasha). Abanye imali womshini imikhiqizo yayo siqu futhi uthenge Feng-Bois.
Inkampani Quality Ikhodi
Kukhona Ikhodi ayo ngokuchaza ukukhiqizwa ephezulu, imithetho ukuthi ngokuqinile khona wizadi.
Sebenzisa ukucindezela ovundlile kuphela bagasse feedstock.
Ebanjwa vinification egcwele yemvelo.
Kuyinto ayimpoqo test ziphuzo zazihluzwa, futhi okubaluleke - ekumisweni izinhlayiya emihle.
Ukuze izingxenye ezisetshenziswa kuphela izigubhu, ezenziwe ngesandla se-okhi * ezindaweni Tronse futhi Limousin.
I-iziqukathi scalded ngamanzi abilayo futhi wetted nogologo ngomumo ukuguga. A phambi yesivalo alcohols kuthiwa buhlanjululwe kuya ku-60% amandla.
Umswakama zewayini kanye storages - 80% nangaphezulu.
Exposure Kwenziwa izinyanga okungenani 8 imiphongolo entsha, futhi ke impahla eluhlaza is batheleka ubudala.
Assambliruyutsya baphuze kuphela utshwala ukuchayeka usuphothuliwe.
cognacs Ready abaneminyaka imiphongolo elincane kwaze kwaphela unyaka, futhi phambi bottling e ingilazi isihlungi olwengeziwe. Sami amabhodlela aba engahashazanga phambi egcwala nogologo.
Futhi - izimiso eziyisisekelo efakwe ohlwini ukukhiqizwa, okuyinto ezikhiqizwa eliphezulu nogologo kuphela (inqubo isithombe, bona ngezansi).
Kuyacaca ukuthi imithetho eqinile enjalo, okuyinto bakhathazekile ngomphumela ukuhambisana nokuthi abanikazi inkampani, kanye nokulawula emizimbeni bangaphakathi nabangaphandle, musa ziphakamisa umkhakha mass. Kodwa mhlawumbe kungcono kube ngcono, njengoba lokhu isiphuzo, akungabazeki, has ubuso yayo yasekuqaleni. Ngesizathu esifanayo Hine - VSOP nogologo noma yimuphi omunye bale "uHein" ekhaya - akusho ngaso sonke isikhathi ukuthola indawo emashalofini ezitolo abathengisa imikhiqizo ezifanele. Futhi manje Imininingwane okuncane mayelana ngamunye imikhiqizo ekhaya.
Ukuze kukhiqizwe lolu hlobo isebenzisa inhlanganisela yakho yokuqala. Siqukethe 60% utshwala womshini GP Champagne nogologo, 40% - we eluhlaza Petit Champagne. Ngaphezu kwalokho, uma omncane utshwala ukuchayeka - iminyaka 4.5, i- "Moldova" iningi - ngonyaka 15 ubudala. Izinzuzo kwendingilizi kuyadalulwa ngu preincubation alcohols imiphongolo eceleni komunye nomunye. Khona-ke kakade ayoliswe okuphakelayo efanele kuyinto exubile, futhi kwaphumela isiphuzo yizicukuthwane okwengeziwe asebekhulile tarakh encane - French oki imiphongolo. Umphumela: nogologo esithambile futhi oyindilinga (bheka isithombe ngezansi), okuyinto ezilinganiswe ngokuphelele. It is zihlukaniswa ngemibala izimbali kanye izithelo, jasmine noju. Anakho enhle kakhulu futhi ehlala phakade aftertaste futhi ukunambitheka ripeness. Lokhu VSOP - ngempela, ukuziqhenya sha futhi kumnikazi master emiphongolweni - Uthole esasiwafanele esiliva indondo 2000 emcimbini ngamazwe, Imimoya Challenge mncintiswano. Okuqukethwe utshwala yalesi siphuzo - 40%.
Cognac Hine Antique XO - mncane kakhulu futhi isiphuzo wabonisana. It is cishe ngokuphelele ukulinganisela kusuka ezingaphezu kuka-50 izinhlobo nogologo, umsuka Petit futhi Grand Champagne. Iyatholakala kusukela 1920. It has a aura amnandi exhumanisa amandla elilungile nesisa esithambile. Taste kancane kancane phendla you yonke impahla shades of vanilla, pepper, obomvu nomhlophe, inkanyezi anise kanye Mint, nesinamoni. Futhi samanje futhi i-oak amanothi, okubonisa ukuthi ukuchayeka eside izinto zokusetshenziswa. It has a sekugcineni eside kakhulu futhi ngokuvumelana ripeness. "Montecristo" inombolo Bernar Hayn uncoma kakhulu le ndlela ngoba nogwayi 1 noma 3: Abalandeli okunye ugwayi.
Brandy setha "uHein" - isipho lover isiphuzo esihle elite ephelele. Hine Vintage Setha № 1 kuhlanganisa amathangi ezintathu nge-brandy 0.2 l, amandla - 40%. Lena isiphuzo indoda langempela. Futhi ngempela siyindlala umphakathi utshwala Ongoti ubuciko nogologo kweqiniso. Ngokokulandisa, kunjengewayini ezinhle, e vintage nogologo ukunambitheka kanye uhlamvu kakhulu kuxhomeke isimo lokhu noma lowo nyaka kwezitshalo, izimo lokuguga. Ukulinganisa isiphuzo ezingaba, wasebenza iminyaka eminingi ukuba khona endlini, kukuvumela ukhulume ukunambitheka ekahle. Vintage Cognac Hine, ogama intengo iqala kusukela izinkulungwane zamaRandi ukuze iqoqo empeleni kuhlanganisa ezintathu ezahlukene distillate endala ukukhanya utshwala, ngalinye elikwazi uhlukile. kits akhishwa eziningi limited futhi njalo baziswa abalandeli. Three millesime iwayini - ngumngane ephelele isipho lokuzalwa kwami, naye ibhizinisi noma kumqashi besilisa.
Hine Vintage 1957 kunobuciko esithambile futhi zikanokusho: izithelo, izimbali, jasmine ne ibhilikotsi. Umbala okucebile eside. Iphunga ngamanothi eyinhloko izithelo ezomisiwe kanye esihle lesikhumba ukushuka.
Hine Vintage 1975 - amathoni of izinongo kanye oki, liphinyiselwe tannins. Wazizwa amanothi ezikude clove kanye aftertaste eside.
Hine Vintage 1981 - shades of izithelo ezahlukene, amanothi vanilla peach.
Cognac Hine. Izibuyekezo
Ukuqoqwa isiphuzo idatha ngokucacile hhayi eyenzelwe ukusetshenziswa okwejwayelekile kanye mass ukukhiqizwa. Hine - nogologo, kudinga ukunakwa kanye nenhlonipho. Thola okungenani yokuthi it is ngokusemthethweni zilethwe eNkantolo IsiZulu seNdlovukazi. Futhi iqiniso ezithakazelisayo ukuthi, ngokwesibonelo, i-cognac Hine Umkhaya Reserve, nalowo muntu wendlu ethulwa "Hain ', itholakala nenani ngokuqinile elinganiselwe kwabiwa ngezinkulumo amabhodlela olunezinombolo. Blend isiphuzo idaliwe kusuka alcohols ukukhiqizwa ezahlukene Grand Champagne. Isici ukuthi yokugcina sifakwe emanzini isinyathelo yenzeka encane imiphongolo kwesihlahla se-okhi French kubo (emva kuhlangana impahla eluhlaza). a nogologo okunjalo super-elite - samuntu obugagu namasiko endlini, "Hain". Kunconywa ukuba ukusichitha ngamaholide ezinkulu: imikhosi umndeni, imishado, nemigubho. Izibuyekezo mayelana nokusetshenziswa cognacs - ngaphezu emapheshana lesemkhatsini futhi, njengoba umthetho, okuqukethwe laudatory kuphela. Isiphuzo uhlale ujabule izivakashi babezazisa, kunobuciko oyindilinga, aftertaste eside kakhulu futhi ihloniphekile Iphunga brandy ezimnandi zakudala: izimbali namahlathi, oki amanothi. Ngokusho abalandeli abaningi (kanye zaziziningi izincomo), lokhu nogologo is best kwakuvumelana nale Dominican nogwayi, has a iphunga olubucayi. Nokho, ngokuvumelana izivakashi banambitha iphupho yizicukuthwane isiphuzo nogologo "uHein" kuhle kakhulu shokolethe, hhayi kophudingi amnandi kakhulu, izithelo kanye bhisikidi ushokoledi. Lokhu isiphuzo akuwona neze wakhonza etafuleni ngaphansi izifundo lokuqala nelesibili. Ngokusho abalandeli, anakho ingxoxo enobungane sesidlile, ukunconywa ngokwanele, kungaba kugcizelelwe inkomishi yekhofi kanye nesinamoni esihle nogwayi noma ugwayi.
umlando kwakamuva we nogologo indlu endala
Kusukela ekuqaleni kuka-2000 umlando entsha "uHein". Ngezinye zokuphatha amathathu nanhlanu esimisiwe M. Cornell, okuyinto usekhuluma okugcizelelwe ukukhiqizwa imikhiqizo nogologo endlini. Ngakho manje cishe kungagcini inkampani yokukhiqiza Cognac Hine Antique XO futhi VSOP nogologo. Ukugcizelela futhi uya ekufezeni ukukhiqizwa bottling vintage amabhodlelo amancani elite 0.2 amalitha ngokuya isipho lishona, okuyizinto ngempela eqolo. On the ngemuva ngamunye iziqukathi nge iminyaka nogologo ezahlukene ukukhululwa umbhalo oqoshiwe okungase lihunyushwe kwelesiHeberu elithi isiFulentshi ukuze asenzi eziningi, senza kuphela best! Embodying isiqubulo, inkampani uqobo selande laze laba uhlobo Chic, "Brandy» Aston Martin, elite embonini yezimoto. Futhi ukuthuthukiswa zalezi amasu amasha, ngokuqinile futhi axhase we rarities mncintiswano imoto kule nguqulo yesiNgisi eGoodwood.
Sambuca. Kuyini futhi lokho ukuwaphuza?
Uwoyela Mustard: izakhiwo ewusizo kanye contraindications, isicelo izinwele kanye isikhumba
Indlu iqashwe laseDnepropetrovsk
Potato ijusi esiswini: isicelo kanye nokubuyekeza
Ikhekhe "Luntik" holiday yezingane
Highlights amaswidi Armenia